Nicolas Maduro နှင့်သူ၏ minions ungainly အပေါ် more ...
23 ဧပြီလ 2019
[ 15 abril, 2019 ] La jaula de una torre de Babel, que se desmorona en una Europa que se enternece tontamente, mientras se manda mensajes de whatsapp con imágenes repetitivas, eso sí de calmadas y sonrientes posturas. မူဝါဒက
[9abril, 2019 ] Más de 500 funcionarios españoles han perdido su plaza por condena desde 1996, un centenar de ellos por malversación နိုင်ငံသားဖောင်ဒေးရှင်းမှ CIVIO
စတင်ပြုလုပ်ခြင်းMundoတောင်အမေရိကဗင်နီဇွဲလားNicolas Maduro နှင့်သူ၏ minions ungainly အပေါ် more ...
25 စက်တင်ဘာလ 2018 Belz ဗင်နီဇွဲလား 0
တစ်ခုစွပ်စွဲချက်တိုက်ခိုက်မှုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ၏ morass မှတစ်ဦးကဆက်ပြောသည်မှတ်စု Nicolas Maduro Moroမိမိအ minions ၏တဦးတည်းဖို့နဲ့အပြင်တစ်ဦးပဲ့သတိပေး: ဖာနန်ဒိုဇာလ Fuentesစာရင်းနှင့်တာဝန်ခံ၏နေ့ပေးရလာသောအခါသောကြောင့်, ရေတွက်မရသင့်ကြောင်းဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပုတ်သင်ညိုကိုငါသိ၏။
ဂုဏ်သိက္ခာရှိဖို့နောက်ဆုံးပေါ်ထိုးနှက်နှင့်အစိုးရတို့ကယုံကြည်စိတ်ချမှုတစ်ခုသက်သေပြမရှိခြင်း Nicolas Maduro Moroတရားဝင်သည်၎င်း၏ဝါဒဖြန့်ဌာနသို့မကြာမီအချို့တစ်ခုသို့မဟုတ်အများကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုအချို့သောအချိန်များအတွက်အခိုင်အမာထားပြီးအဘယ်အရာကိုသတိထားမိသွားစရာမလိုဘဲ, ကျေနပ်သဘောတူချက်ကိုထပ်မံအတည်ပြု versionada တစ်ခုယူဆချက်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ ဗင်နီဇွဲလားဒါကြောင့်အမြဲတမ်းဗင်နီဇွဲလား filibuster ဖို့ကြောက်မက်ဘွယ်သောပွောငျလှောငျပေါင်းဘီကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလက်ခံနိုင်ဖွယ်မဟုတ်သည်ကို ထောက်. မာဒူရိုဆိုးယုတ်သော Expiation အခြားနိုင်ငံများမှထုတ်ပေးနှင့်သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်ယနေ့တင်ပြ, မနက်ဖြန်အမျက်ဒေါသ၏ "ဘုရား" ဟုပြောတစ် canard ၏ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သူ့ဟာသူချေးငှားသည်တစ်ခုအလုပ်သင်အကြမ်းဖက်အရှေ့တီမော၏ဖုံးအုပ်လျက်ရှိစွပ်စွဲနေတဲ့အကျဉ်းသားအဖြစ်နှင့်ဝန်ခံညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ကြောင်း လျြောအာဏာရှင်များ၏ရှင်းပြချက်အဘို့အတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတိုးချဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူပြီသောဒီတော့နာကျင်ကျိန်းစပ်ခြင်းနှင့် melodramatic ယခုအချိန်တွင်နေဖြင့် (အဘယ်မှာသက်ဆိုင်သော) အဆိုပါသံရုံး ကိုလံဘီယာ, မက္ကစီကို y ချီလီ သမ္မတကခံစားခဲ့ရမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နှင့်အတူ "ဟူသောစွပ်စွဲချက်" တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ( အမြဲတာဝန်အပေါ် ) နေ့တိုင်းဘဝတွေကိုနှင့်ကုန်တင်အန္တာရာယ်မှမဟောင်းခေတ်သင်္ဘောသားတပ်မက်လိုချင်သောအခံရဖို့သိပ်အရွက်အကြောင်း, သောအခါ, အမှတ်တမဲ့ deplorable singladura လေ့ကျင့်ခန်းမှ၎င်း၏အလုပ်အတွက်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝုိင်းကိုပိုပြီးနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်ငြင်းပယ်ခံရကြုံတွေ့နေကြရသည်။
သူကလက်ထောက်စွပ်စွဲ Julio Borg နှင့်အခြားနှစ်ဆယ်ခုနစ်ခု "ရှေးခယျြ"ခံမှုရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူဖမ်းဆီး , အဖွဲ့ဝင်များကိုအတိအကျနှင့်ကျွမ်းကျင်သူသက်သေအထောက်အထားမရှိဘဲပုံမှန်အတိုင်း vexatious မှလွဲ. လိုအပ်သော inductors လွှမ်းခြုံပေးနောက်ဆုံး4သြဂုတ်လထောက်ခံရန်နှင့်ဗင်နီဇွဲလားဇာတိမြေ၏အကျပ်အတည်းဖြစ်နေသောနောက်ခံလူအပေါ်ခုနစ်လုံးကိုအသေးအဖှဲဒဏ်ရာဖြစ်ပေါ်စေလူကြိုက်များအာရုံစူးစိုက်မှုစစ်တပ်များ၏ Esplanade အပေါ်ကိုခေါ်ပေမယ့်အနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုကြောက်သောလေထုထဲတွင်ပေါက်ကွဲမှု, စေလျှင် အချို့သောလေ့လာဆန်းစစ်ဒွန်ကြောင်း flatly ပြောပါတယ်ပေးသောဤမျှလောက်ကြီးစွာသောရဲစွမ်းသတ္တိကြောင့်ဆိတ်, မပြောင်းလဲရှိနေဆဲဖြစ်သော က Nicolas သူတို့ရဲ့အမူအရာအားဖြင့်၎င်း, မျှော်မှန်းထားသည်အဖြစ်ကြောက်တယ်ကြည့်သည် "ပုံပြင်" မေးမြန်းသည့်အချိန်တွင်အများဆုံးမျှော်လင့်မထားတဲ့နှင့်စစ်မှန်နှင့်သတင်းနာရီပေါ်မှာဆော့ကစားနိုင်အောင်တိကျတဲ့မသိဘဲ, ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ထိုလူအပေါင်းတို့ကဤဖြစ်ပျက်များနှင့်နေစဉ် You Tube အဲဒါကို "ဟုအချို့သော alias ကိုပုံပေါ်အထက်ဖော်ပြထားတဲ့ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်. ဗီဒီယိုများနှင့်ပြည့်စုံလေ၏Morpheus"Mustachioed နှင့်ပညတ်, နာမည် Henryberth Emmanuel Rivas Viva, အရာသူသည်နှာခေါင်းအတွင်းပထမဆုံးကိတ်မုန့်ကိုပြောတယ်, တိုက်ခိုက်မှု၏ရေးသားသူဖြစ်ခြင်းတို့နှင့်ကြီးသောအံ့သြနှင့်အတူရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကျွန်တော်တို့ကို left နှင့်အခြားသူများပျကွံဖကြံစည်မှုအတွက်ကွံထားပါတယ်သောအရာတီထွင်မှု၏သွန်းစုဝေးပြီးနောက်နည်းပညာပိုင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဖက်တော်ကိုနှိုးဆော်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည် စပိန်အိမ်ထောင်ဖက်သတ်မှုများလျော့ချဖို့ထွက်ပြေးမနေ့ကအစိုးရအမေးသော် Pedro Sanchez, သူသည်သံရုံးကနေညွှန်ကြားချက်အောက်တွင်ပြောင်းရွှေ့သင့်ကြောင်းထည့်သွင်းဆက်လက် ချီလီ Friday, ပြီးတော့နှင့်အတူတူပင်ကနေ၏ရန် မက္ကစီကို နောက်ပိုင်းတွင်ကြောင်း၏ ကိုလံဘီယာ နယ်စပ်ဦးဆောင်အနေအထားကိုတလျှောက်ကားဖြင့်တိုင်းပြည်ရရှိရန်ယခင်ကစကားမစပ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုမည်သူမဆိုကိုမတှေ့နိုငျသောသက်ဆိုင်ရာလမ်းညွန်တစ်ဦးခရီးစဉ်မဟုတ်ဘဲပုံတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်အဖြစ်သူ့ကိုအမိုးအကာပေးနိုငျသူယဇ်ပုရောဟိတ်ကိုပင်ကိုယ်စားလှယ်ကို လုပ်. , ပရိသတ်တွေအကြား "အခန်းကဏ္ဍ" ၏ဂိမ်းနဲ့တူမှာ "ခရီးစဉ်" ခရီးသွားပြီးနောက်, စျေးပေါရမ်တစ်ပုလင်းထဲမှာရောနှော Banshees နှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်။
ကျွန်မမကြာခဏပြီးသားသူတို့ .. တစ်ဦးသေနတ်ဒဏ်ရာ caliber 12 ၏မျက်နှာကိုအနာများနှင့်ဓါးတွေနဲ့ခုတ်ကုန်တယ်ခဲ့သောဤမျှလောက်များစွာသောအမှားတွေ, အောင်ဖို့ "Morfeo" ၏အိပ်မက်မက်, ဒါမှမဟုတ်မှာအကောင်းဆုံးကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့်အတူသူနည်းနည်းဆွဲဆောင်မှုရှိသောအလုပျကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ သိသာလုပ်ခလစာနှင့်ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ယုံကြည်မှုနှင့်ကိစ္စတွင်မှထုတ်ချေးချောမောသူ့ကိုကျန်ရစ်ခဲ့သောဘယ်မှာခွဲစိတ်ကုသခံယူပြီးနောက် Bonaire ဖို့လက်မှတ်နှင့်အတူ။ ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်သော်လည်း, အမိန့်ဒီလိုမျိုးအတွက်အဘယ်သူမျှမရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့လမ်းကြောင်းထွက်ခွာမည်။
အရင်းမြစ်များမရှိဘဲဗင်နီဇွဲလားခံစား၏ကံဇာတာတစ်မူထူးခြားတဲ့ဘီးနှင့်အတူတိုင်းပြည်တစ်ပြည်၏လောင်းကစားရုံမှာသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအန္တာရာယ်များနှင့်အများကြီးလျော့နည်းအတူ hoax ၏ဇာတ်ကောင်ဖို့အရေးကြီးပုံကိုပေးသူကိုသူလျှိုနှင့်သောင်းကျန်းသူများ၏ဤရုပ်ရှင်၏ဇာတ်ညွှန်းအားလုံးကိုကြောင့်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူ သောကမင်းအရာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးအစားအခိုင်အမာ။ ကျနော်တို့ကသင်ချင်ကဲ့ရဲ့နိုငျသညျ, ရှင်းပြပေမယ့်ဘာတသမတ်တည်းတည်ကြည်ခြင်းနှင့်စည်းလုံးဒီမိုကရေစီကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ဦးက) က ကိုလံဘီယာအမျိုးသားထောက်လှမ်းရေး (DNI), အ CNI ချီလီအမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးရေးစင်တာ နှင့် CISEN စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနှင့်မက္ကစီကို၏အမျိုးသားလုံခြုံရေးအဘို့အစင်တာ, ကဗင်နီဇွဲလား syndrome ရောဂါလှည့်အဖြစ်အစွမ်းကုန်အာရုံစိုက်မှုနှင့်နိုင်ငံတကာတင်းမာမှုများ၏ကိစ္စရပ်များအတွက်၎င်းတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူ defining မစ်ရှင်ဖြန့်ဝေတစ်ခါမျှ, ဒါပေမယ့်ကို C-4 နှင့်အတူသူမ၏အလုပ်တုံ့ခဲ့သောစာတစ်စောင်သို့မဟုတ်တိုတောင်း Wand မှကစားခဲ့ ကာပျံသတ္တုငှက်ကစားစရာများနှင့်အဝေးမှပေါက်ကွဲမှု device ကိုသို့တွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်ဝက်အူဟာ့ဒ်ဝဲ, - အမြင့်, ထို့နောက်များနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ကြံစည်မှုသတိမရှိသောရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကိုခံရ, အကျောရိုးအခြားနှစ်ခုစင်တာများကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုနှင့်အလောင်းအစားနှင့် perjurar ရှေးခယျြ ဒါဟာပျက်ကွက်ဤကိစ္စတွင်အတွက်စီမံကိန်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပိုပြီးတစ်ခုခုပရိုဂရမ်းမင်း, မီးခိုးနှင့်အသေချာစဉ်းစားစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်မဆိုမရှိပဲတသမတ်တည်းနောက်ဆုံးမှာ Adobe ၏နံရံတစ်ခုဖြိုဖျက်တဲ့အစီအစဉ်ကို execute နှင့်ဘယ်တော့မှမီးပူနှင့်အတူအဘယ်သူကာကွယ်ပေးယုံကြည်နေမည်သူအပြစ်တင်ဖို့တိဖြစ်ပါသည် ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတ။
နှစျဦး) ကသုံးထောက်လှမ်းရေးစင်တာများ, camouflaged စစ်ဆင်ရေးများနှင့်လျှို့ဝှက်နည်းဗျူဟာများဟာသူတို့ရဲ့စီမံကိန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့များမှာ, ဒါဘယ်တော့မှ, ဘယ်တော့မှအစဉ်, ဒါ slapdash ဖြစ်ခြင်းမသိကြကုန်အံ့တစ်ဦးတည်း, ပရော်ဖက်ရှင်နယ် pruritus နှင့်အခြေခံ protocol ကိုတို့ကလျော့ရဲရဲကြီးစွန်းတိုင်အောင်စွန့်ခွာ နောက်ထပ် ado မရှိပဲ, "စာရေးဆရာ" ဟုသခွားသီးထက် dumber ကြောင်းကို သိ. သူအခမဲ့ထပ်မံထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ, သုံးမီတာမြေအောက်အပေါက်မှတဆင့်ငရဲတစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တိုက်ရိုက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အားပေးခဲ့ဒါ, အချည်ရွေ့လျား လိုအပ်ခဲ့လျှင်လူ့အဖွဲ့အစည်းကဒီမှာသို့မဟုတ်အဲဒီမှာအတွက်ချောင်သူသည်အန္တရာယ်များတဲ့စိတ်, အရှင်တစ်ခုမသက်မသာတရားစွဲဆိုမှုသက်သေကိုဖျက်သိမ်းရေးအဝိဇ္ဇာနှင့်ကျိုးအရိုးတစ်အိတ်ပါလိမ့်မယ်။
သုံး) ထို့ကြောင့်အရာရာ (က SEBIN ကတည်းကခဲ့ညွှန်ပြ Bolivarian ထောက်လှမ်းရေးဝန်ဆောင်မှု ) အတူတကွပါ (DGIM နှင့်အတူ စစ်ထောက်လှမ်းရေး၏ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ ), ဒီအခိုက်မှာသီအိုရီအတွက်အသံဖြင့်အမိန့်ပေးခဲ့ကြများမှာဘယ်, ဝေဖန်သူများကရိုသေလေးစားမှုမရှိဘဲရွှံ့ပစ်ရန်ဤအတွက်နည်းနည်းကျွမ်းကျင်ပေမယ့်, ဖြစ်ကောင်း Turkish သို့မဟုတ်မှလွှတ်ပေးရန် atoning တစ် knucklehead များအတွက်ကြည့်ရှုကြသူများမှာ လက်ျာဘက်နှင့်သူ၏ဖမ်းဆီးပေါ့ပေါ့ဒါကြောင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်, လှဲမှားသောအထင်မြင်မှားစေသောနှင့်ထဲမှာပြင်ပကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်လယ်ပြင်လေ့ကျင့်ခန်းအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုအကြောင်းပြချက်အဖြစ်ပုံပျက်သတင်းအချက်အလက်ပြီးနောက် left မော့ဆက်, ဆဲဤမျှလောက်စုဆောင်းအနတ္တအားဖြင့်တင်ပါးကိုချိုးဖောက်နှင့်အချို့သောကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကမ္ဘာကိုချဲ့ထွင်, ဝန်ခံမဟုတ်သလိုဒီကြောက်မက်ဘွယ်ရုပ်ရှင်နားလည်ရန်ကြိုးစားမတော်မူသောသည်းခံစိတ်အနည်းငယ်မျှသာနားလည်မှုသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရမည်, ဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူ interminabe culebrón၏ Fiction စီးရီးဖြစ်လာ တခြားသူတွေရဲ့မှေးမှိန်လာကိုင်တွယ်ပြီးနောက်သူ့ကိုဘွားသောသူကြောင့်နေမကောင်း-fated မည်သူမဆိုစကားကိုနားမထောင်ဘူး "reggaeton" မဟုတျဘဲပင်နှင့်အမိ၏တစ်ခုတည်းသောအဆိုတော်ဖြစ်ဖို့ယုံကြည်သောသူသည်မကောင်းသောအာဏာရှင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့စိတ်ကူးယဉ်။
မအစိုးရကြောင့်မေ့လျော့မနေသင့် မာဒူရို သူထွက်ဘောလုံးပစ်အပေါ်အလေးအနက်ဆိုသည်တချို့နာကျင်ကျိန်းစပ်စပိန်ကနိုင်ငံရေးကြင်ယာတော်နှင့်အတူကြံထဲမှာလေထု၏မရှိခြင်းမှမဟုတ်ပဲဘောလုံး, အစားသူရဲဘောကြောင်နုတ်ထွက်သည့်အလင်းဆုံပင်သစ္စာဖောက်ဖမ်းဆီးနှင့်အတူပြီးသွားပြန့်ပွားရန်ထွက်ခွာ Lisbeth Angela Carrillo Exposito"ထငျသေးစရာကိုခေါ်ဘယ်ဟာ ခှေးအိမျ စပိန် "Dual-နိုင်ငံသားအဖြစ် - ဗင်နီဇွဲလားတစ်ခုအန်ဂျီအို၏ဦးခေါင်းသည်အတိုင်း, သူတို့ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုစောင့်ရှောက်ခြင်းကစွပ်စွဲအခြားခွေးတို့တွင်အပျနှံခဲ့လည်းသာထောင်၌ယခုလူထုအုံကြွမှုများအတွက်အကြောင်းပြချက်နှင့်အတူလူကပိုင်ဆိုင်ခွေးကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်ရန် ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် အော်စကာ Perezပုန်ကန်တတ်သောဟောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဇန်နဝါရီ 2018 အတွက်ထောင်ချောက်ပြီးနောက်ကျသွားစိတ်ပျက်အားငယ်စွာပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဇွန်လအတွက်တရားမျှတမှု၏အကျင့်ပျက်ဗင်နီဇွဲလားတရားရုံးချုပ်တိုက်ခိုက်ခြင်းအားဖြင့်ယဇ်ပူဇော်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုလုပ်ရပ်စဉ်းစားရသေးသောအရာကို၌သေကြ၏။
ကြောင်းရှားပါးခဲ့ကြသည်နှင့်အများကလျင်မြန်စွာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများရလဒ်များကိုစောင့်ဆိုင်းသောတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးရောက်ရှိရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းအစစ်အမှန်ဒီမိုကရေစီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ဤကျြ၏အပိုဒ်တွင်ပါရှိသောကြေညာချက်လျှင် OEA, Nicolas Maduro Moro အောက်တိုဘာလ 2018 အတွက်ဖြစ်စေတစ်ဦးပြောင်လှောင်အာဏာသိမ်းမှု0အသွားအလာမတော်တဆမှု, လေ, မြေသို့မဟုတ်ပင်လယ်မှတဆင့်သတ်ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မည်ဟုကြေငြာလိုက်သည်။ အရမ်းဆိုးသည်သူ၏အထူးသဖြင့်ဂုရုထိုကဲ့သို့သောစိတ်ပျက်မိကြောင်းကိုရှောင်ရှားဖို့ပိုပြီးအသေးစိတျကိုမပေးခဲ့ပြီးမကြာမီသူသည်မိမိရပ်ကွက်အတွင်းစဉ်ပျောက်ဆုံးသွားရာ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာသာယာဝနှစ်များတွင်စုဆောင်းပျော်မွေ့ရန်သင့်အားနှင်ထုတ်မည်ကြောင်းကံကြမ္မာကြောင့်မသွားပါစေ သူ့ကိုတစ်နိုင်ငံတောင်းဆိုရပ်တန့်လိမ့်မယ်။
ငါတို့သည်တဦးတည်း၏နောက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းအဘို့ကျန်ကြွင်းစေပြီ ဖာနန်ဒိုဇာလ Fuentesဗိသုကာအစွမ်း Bolivarian စစ်အစိုးရနှင့်အလုပ်အတူတူအားလက်ခံတွေ့ဆုံနှင့် ထင် သိသာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးသတင်းပေး, ကျွန်တော်တို့ကိုလွန်ကတားသောမိမိအများအပြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူ, တချို့ rancor နှင့်အတူ mented ထားပြီးကြောင်းဝန်ခံ Caracas ၌သူ၏သန့်ရှင်းရာဌာနထံမှကျွန်တော်တို့ကိုခြိမ်းခြောက်နေနှင့်ကျနော်တို့ဒါမသိသော Oedipus ရှုပ်ထွေးသို့မဟုတ်ညံ့လို့များနှင့်အဘ၏နေရာတွင်မှတ်သား ဒီကနေကျနော်တို့ကတရားရုံးမှတစ်ဆင့်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုပေးပို့ဖြစ်စေ, လုံးဝတိတ်ဆိတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဖြစ်မှန်သင့်ရဲ့အိပ်မက်ပါစေရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်သောကျွန်တော်တစ်ဦးနိုင်ငံရေးနှင့်ပထဝီအနေအထားတွင်တည်ရှိနေကြသည်ဟုဆိုကာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသမာဓိရှိစိတ်မချရကြောင်းဖျောင်းဖျ, သတိပေးကြစေဟုအနျတိုကျတှနျး ငါတို့သည်ပိုကံဆိုးခံစားနေရပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါသော်လည်း, ခြိမ်းခြောက်ဖို့မလှယျကူသောကွောငျ့ဖွစျသညျတော်မူသောရည်ရွယ်ချက်များအပေါ်တစ်ဦးကြောက်မက်ဘွယ်သောတရားသဖြင့်စီရင်အတူဒါထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Hitman လျှင်ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်း, သူ့ကိုငြိမ်ဝပ်စွာနေရစေမစိတ်ကူးရှိပါတယ်။ တဖန်သင်တို့ဖာနန်ဒိုကိုငါသိ၏။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသခင်ဘုရားသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါသည် ဖာနန်ဒိုဇာလ FuentesMessenger ကိုကျွန်တော်တစ်ဦး hoot တစ်ခုသို့မဟုတ်သူကပြောတယ်ဂရုမစိုက်မဟုတ်လျှင် !. ကျနော်တို့အတိအကျအစိုးရက exala တူသောအားလုံးအနံ့ကိုစို့ဖို့ dredged ခံရသောအဆိပ်ကောင်းစွာသို့၎င်းတို့၏နှာခေါင်း recant နှင့်ကပ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ် Nicolas Maduro Moro။ သင်ပြုခြင်းနှင့်စာအရေးအသားအတွက်လျှင်, ငါတို့သည်ကြောင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတော်မူပြီခေါင်းမာလွန်းရပ်တည်ချက်နှင့်မိုက်မဲခြင်းနှင့်အတူဘုန်းအသရေ၏ဒုတိယနုတ်, သင်ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်တစ်ခုခုကိုမဆိုအမြင်နုတ်အလိုရှိ၏။
စပိန်၏တရားရေးဝန်ကြီးတယောက်ကအမှတ်တမဲ့တစ်ည့်စားတတ်သောဟောင်းကော်မရှင်နာ၏နှုတ်ခွန်းဆက်နှင့်အသိအမှတ်ပြုမှုကိုငြင်းပယ်ဖို့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုများ၏သားကောင်ဖြစ်လာ postulated ဖြစ်ပါတယ်
El hospital español en Hahití que nunca existió. 22 ဧပြီလ 2019
“La injusticia, en cualquier parte, es una amenazaala justicia en todas partes.” 20 ဧပြီလ 2019
Tampoco puede haber perdón para quienes contribuyenaaliviar las penas de los reos y no la de las víctimas afectadas y sus familias humilladas 19 ဧပြီလ 2019
La jaula de una torre de Babel, que se desmorona en una Europa que se enternece tontamente, mientras se manda mensajes de whatsapp con imágenes repetitivas, eso sí de calmadas y sonrientes posturas. 15 ဧပြီလ 2019
Más de 500 funcionarios españoles han perdido su plaza por condena desde 1996, un centenar de ellos por malversación9ဧပြီလ 2019
EntrevistaaMarc-Aurel Bonne-Année, candidatoalas presidenciales de Haití6ဧပြီလ 2019
España: un exceso de tolerancia y humanidad mal entendida, aplicada por leyes excesivamente permisivas6ဧပြီလ 2019
500 အရာရှိတွေကသူတို့ 1996 ကနေကျပ်တည်းသောစစ်ကြောစီရင်၎င်းတို့၏ရာအရပျကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြခြင်းထက်စပိန်မှာပိုပြီး
26 နိုဝင်ဘာလ 2018 0
သူတို့ထဲကဒီartículoTweet201 Share ရဲဖြစ်ကြသည်။ ဤအပိုပြီးကိစ္စရပ်များကိုအာဏာပိုင်များနှင့်ထက်ဝက်ကျော်များအတွက်အကောင့်ပေမယ့်ပြစ်မှုထင်ရှားသူတွေထဲမှာသာ 45, (ယောက်ျား 459 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ) အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်။ CIVIO များအတွက်စုံစမ်းသတင်းစာပညာ 21 / 11 / 18 [ ... ]
25 သြဂုတ်လ 2018 0
ဒီပြောင်းလဲသွားပြီဘယ်လိုဒီartículoTweet¡ Share !. အဟောင်းကို Creepschool လက်ရှိဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ် .. နီးပါးမျှသောငှက်များ။ သငျသညျတူညီသောရှိပါကတစ်လူဆိုးစာရင်းကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျဘာမျှဆိုလိုတယ် [ ... ]